Emirates inoratidza UAE yekudzivirira nhanho nendege yakakosha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates inoratidza UAE yekudzivirira nhanho nendege yakakosha
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Emirates yakasarudzika nendege inotakura chete yakazara vaccined vashandi uye vafambi vari muchikepe
Ndege yeA380 kutakura zvakakwana vachengeti vashandi uye vafambi vari muchikepe
Flyers kuona Emirates 'nyowani A380 cabins uye zvazvino pa-pasi matekinoroji ayo anofambisa runyararo uye nekukurumidza rwendo kuburikidza nendege
Zvinotorwa kubva mundiza kuti zvipiwe kuEmirates Airline Foundation
Emirates irikuratidza kufambira mberi kunoshamisa kweUAE muchirongwa chayo chekudzivirira nendege yakakosha inotakura chete vaccinic yakazara yakazara uye vafambi vari muchikepe.
Pa 10 Kubvumbi 2021, chaiyo nendege EK2021 ichaenda Dubai International Airport na12: 00hrs nguva yemuno, kufamba pamusoro penzvimbo dzakasiyana muUAE. Ndege ichadzokera kuDubai na14: 30hrs nguva yemuno.
Ndege-imwe yekubhururuka EK2021 chiitiko chakasarudzika icho kwete chete chekupemberera kubudirira kweiyo UAE chirongwa chekudzivirira kusvika parizvino, asi zvakare inoratidza Emirateskufambira mberi mukudzivirira vashandi vayo uye kunyanya vatyairi vayo nevashandi vemakabhini. Kubhururuka kwave kuri uye kuri kuramba kuri simba risingachinjike pane zvakanaka, kubatanidza vanhu nemaguta, kufambisa kukosha kwekutengeserana uye nzendo dzevatakurwi dzinounza hupfumi uye mufaro kumamirioni avanhu.
Vatakuri vanozove nemukana wekuona ndege nyowani yeEmirates yeA380 iyo inoratidzira zvigaro zvemuchadenga zvitsva zvePrimiyamu zvigaro, uye dzinozorodza dzimba dzemukati dzemakamuri mukati memakirasi ese emakamuri.
Vapfuuri vanofamba paEK2021 vachakwanisa kuona ese eA Dubai International Airport's services uye zvinowanika pasi vasati vakwira.
Uye zvakare, vatengi vanogona zvakare kuyedza yekutanga-ruoko, ese matsva matanho ekubatsira vafambi kunakidzwa nerunyararo uye nerunyararo rwendo, kusanganisira iyo nyowani biometric uye isingatauri tekinoroji iyo Emirates ichangobva kuitisa munzvimbo dzekupinda-mukati uye magedhi ekubhodha kuDubai airport .
Mwedzi uno, Airbus yakatanga chirongwa chekufambidzana naye chinonzi "Tripset". Iko kunyorera kunounganidza uye kunopa ruzivo rwekufamba nendege kudzikamisa nekudzosa kuvimba kwevatakuri murwendo rwekupedzisira-kumagumo pavanenge vachifamba nendege panguva yeCOVID-19 denda. Tripset inobvumira vafambi kuti vaziviswe nezvazvino uye zvakanyanya mamiriro ekufamba, zvirambidzo uye nezvinodiwa zvehutano munzvimbo, pasina kubvunza kwakasiyana masosi.
COVID-19 kubaiwa Dubai International Airport Emirates